Coincheck dhawaaqay celinta bilaabaan isbuuca soo socda - Blockchain News
sarrifka cryptocurrency Japanese Coincheck ku dhawaaqday in ay qorshaynayso in ay u ogolaadaan isticmaalayaasha in ay ka baxaan lacagta gudaha ka xisaabaadka ay talaadada soo socota.
Tani waxay timid ka dib markii hack a on Jan. 26, taas oo sababtay ah xiritaanka adeegga kadis. Coincheck markaas ayaa shir jaraa'id oo u qirtay in a 500 NO million calaamadihii (qiimeynayo $533 milyan oo waqtiga) ayaa laga soo qaatay boorsada ay digital by tuugu.
In maanta ogeysiis posted a, shirkadda ayaa sheegay in (via turjumaad aan rasmi ahayn):
“Currently, hantida ee macaamiisha’ yen Japanese waxaa maamula si ammaan ah ee hay'ad maaliyadeed. Waxaan dib u bilaabi doonaan bixid bilaabo February 13, 2018.”
Macaamiisha ayaa lacag lahaa xayiran on dhaafsiga tan iyo markii ay xaqiijisay in soo gaaray waxa ay ahayd badan tahay hack ugu weyn ee taariikhda cryptocurrency.
Hay'adda dhaqaale Japan ee, Hay'adda Adeegyada Maaliyadda (FSA), ayaa sheegay in waqti in, “maamulka aan haboonayn ee halista nidaamka uu noqday caadi ah ee Coincheck.”
Post Previous:Maxaa ku dhacay Exchange Binance iyo markii dalab ka bilaabaan
watch ayaa sheegay in:
Grady ayaa sheegay in: